Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Nidaamyada Tuubbooyinka Qubeyska Roob-biyoodka Ugu Fiican
2020 / 10 / 09 QoondayntaTilmaamaha qasabada 4576 0
Ma jiraan wax ka nasasho badan qubeyska nasashada? Dabcan, haddii nidaamka tubbada qubeyskaagu uusan si wanaagsan u qabanayn shaqadiisa, ma heli doontid wixii aad ku baayacday. Qofna ma doonayo inuu si joogto ah ula halgamo cadaadiska biyaha oo hooseeya, xaglaha madaxa qubayska oo aan raaxo lahayn, xakameynta heerkulka oo liita, ama arrimaha kale ee ka imanaya tubbada qubeyska ee tayada hooseysa.
Tuubbada qubeyska weyn waa wax aad maalin walba ka heli doontid sannadaha soo socda, sidaa darteed waxaa habboon in la maalgeliyo tayo wanaagsan. Wax kastoo miisaaniyaddaadu noqon karto, waxaa kuu furan ikhtiyaarro ka mid ah nidaamyadan tubbada ugu fiican ee qubeyska sannadka 2020.
Delta qasabad 4-Buufiyo taabasho nadiif ah In2ition
Wax lala yaabo ma aha in nidaam qasabadeed Delta uu ku dhammaaday meesha ugu sarreysa liiska? Naqshaddan laba-in-ka mid ah waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku raaxeysatid madaxa qubeyska dusha sare iyo qalabka wax lagu buufiyo oo isku mid ah. Waxaa ku jira xulashooyin si aad u habeysid khibradaada qubeyska, laakiin dhammaantood waa qiimo ku siinaya qiimaha ugu sarreeya lacagtaada. Waxba kama fiicna taas.
1. Delta qasabad 4-Buufin taabasho nadiif ah In2ition
Delta waa boqortooyo adduunka qasabadda, waana sabab macquul ah. Kuwa ay 4-Buufiyo Taabasho nadiif ah In2ition waa dheelitirka ugu habboon ee naqshadeynta khabiirka iyo u-habeynta.
Meelo badan oo madax-maydhasho ah ayaa leh tuubbooyin kuu oggolaanaya inaad ku booddo inta u dhexeysa buufinta sare iyo buufis gacanta lagu buufiyo. Kani waa mid ka mid ah waxyaabaha kuu oggolaan kara inaad labadaba sameyso, oo leh giraan kore iyo buufin dhexda ku buufin kara.
Afar Nooc oo Buufiyo
Magaca nidaamkan qasabadu maahan wax qarsoodi ah maxaa yeelay wuxuu la yimaadaa afar ikhtiyaar oo buufin fudud: buufin duugis ah, buufis jirka oo buuxa, isku dhafka jirka oo buuxa iyo buufinta duugista, iyo hakad
Mashiinka qubeyska wuxuu isticmaalaa Delta Faucet's hindisayaal taabasho taabasho taabasho taabasho leh, oo kuu oggolaanaya inaad si fudud ugu masaxdo iyaga xitaa haddii aad biyo adag iyo kiimikooyin kale ku dhex haysato biyahaaga.
2. Nidaamka Qubeyska SR SUN RISE
Qubayskaagu waa dib-u-gurasho laga bilaabo maalintaada walaaca badan, ee maxaad uga dhigaysaa inuu noqdo oasis run ah? The Nidaamka qubeyska roobka ee SR SUN RISE wuxuu qubeyska u rogaa khibrad raaxo leh.
Madaxa qubeyska ee qaabka roobka ayaa si toos ah u sudhan korka wuxuuna muujiyaa aag ballaaran oo biyo ah halkii uu ka ahaan lahaa durdur yar. Qaabkaas u gaarka ah ayaa ku filan inuu qof walba dareemo inuu ku raaxeysanayo roob diirran xagaaga.
Buufiye Toos ah oo Lagu Buufiyo Qalabka
Markaad isticmaasho inta badan qalabka wax lagu buufiyo ee 'buufiyeyaasha, biyuhu awood badan uma laha sidaas darteed waxay ku socdaan xagal hoose. Tani waxay adkeyneysaa in lagu bartilmaameedsado buufintaada halka aad rabto. Moodelkan 'SR SUN RISE' wuxuu ku buufiyaa xariiq toosan oo dhab ah sidaas darteed waxaad leedahay awood sax ah.
Muuqaal Casri ah oo Casri ah
Nidaamkan tuubada tuubada ayaa ku habboon guri kasta oo casri ah. Iyada oo leh xaglo jilicsan, xariiqyo nadiif ah, iyo xulashooyin dhameystir ah, waxay ku dhameystireysaa musqusha casriga ah ee leh nidaam midab leh.
3. Delta qasabad Linden 17 Taxanaha
Ma jiraa qof la yaabay Delta Faucet oo soo degay laba nidaamyada qasabada oo ka mid ah saddexda dhibcood ee liiskayaga ugu sarreeya? Sumcadooda lagu kalsoon yahay, naqshad aan fiicnayn, iyo astaamo hal-abuur leh ayaa ka dhigaya awood lagu xisaabtami karo.
Qubeyska iyo Qubeyska Maydhashada
Nidaamkan qasabadu wuxuu la yimaadaa ma aha oo kaliya madaxa qubeyska iyo wax lagu buufiyo oo furi kara laakiin sidoo kale tuubada tuubada. Waxay u wada wada lammaaneysaa si aan kala go 'lahayn loogu talagalay runtii raaxo, nidaam lagu kalsoonaan karo. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira, ikhtiyaar qubeys ah oo keliya haddii aad jeceshahay qaabka laakiin aad leedahay qubeys gooni ah.
Nidaamka qasabada tubadaada ayaa qeyb weyn ka ah muuqaalka musqushaada, marka ha u tanaasulin nidaamka leh hal ama labo dhameystir. Nidaamkan Delta Faucet wuxuu ku yimaadaa chrome, ahama, naxaas champagne, iyo naxaas Venetian ah.
Dusha sare ee qaybaha qurxinta, qalabka 'Delta Faucet' wuxuu la yimaadaa qalabkooda tayada sare leh sidoo kale, waxaadna nidaamka ku heli kartaa ama aan lahayn qallafsan. Waxaad heleysaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad ugu rakibto nidaamkaaga oo aad ugu raaxaysato.
Moen wuxuu caan ku yahay taageerida shaqadooda iyo sameynta alaabooyin soconaya, tanna Nidaamka qubeyska T2909EPBN ma niyad jabo. Waxay diiradda saaraysaa hal shay iyo hal shay oo keliya: dhismaha oo tayo leh.
Mararka qaar wax kayar ayaa ka badan, taasina waa falsafadda naqshadeynta ee Moen uu ku qaatay nidaamkan qubeyska. Waa madax qubeys fudud oo leh maareyn aan-qabsi lahayn oo loogu talagalay biyaha iyo xakameynta heerkulka. Waxay leedahay wax kasta oo aad u baahan tahay oo aanad waxba u baahnayn.
Tayada Mudada Dheer
Si ka duwan noocyo badan oo ka mid ah nidaamyada tubbada qubeyska ee liiskan, nidaamka Moen wuxuu la yimaadaa saxiixooda damaanad qaad nololeed xadidan. Waad ku nasan kartaa si fudud in tubbadaadu ay sii socon doonto ka dibna subaxdii ku soo tooso adiga oo wata qubeys weyn.
Fududee Casriyaynta Mustaqbalka
Moen wuxuu adeegsadaa aaladda M-PACT waalka inta ay ku jiraan nidaamkooda tubbada tuubbada. Tani waxay ka dhigan tahay haddii qaabkaagu isbeddelo goor dambe oo ay tahay waqtigii cusbooneysiinta, uma baahnid inaad beddelato tuubbada haddii aad iibsato nidaam cusub oo Moen ah.
5. American Standard 9038804.295 Nidaamka Spectra Versa
The Heerka Mareykanka 9038804.295 waa bayaan sheeko qubays hadaan waligeen aragnay mid. Inta udhaxeysa madaxa qubayska roobka, lifaaqa gacanta, tuubada dheer, iyo garaacida xakamaynta, qubeyskaagu wuxuu isu badalayaa meel aad u qurux badan.
Roob Roob ah oo aan lahayn Rakibo Madax xanuun
Roobabka roobka waa qeexitaanka raaxada, laakiin badanaa waxay la yimaadaan dhibaato: rakibid adag oo saqafka qubeyska ah. American Standard, dhanka kale, waxay kaa dhigeysaa mid fudud adiga oo ku siinaya madaxa qubayska roobka ee gidaarka ka rakibaya si fudud sida nidaamyada tubbada qubeyska ee kale.
Fursadaha Awoodda Biyaha Badan
Nidaamyada tubbada qubeyska badankood waxay leeyihiin hal qiimeyn awoodda biyaha (oo lagu qoro gallon daqiiqaddii ama GPM) waadna helaysaa waxa aad hesho. American Standard waxay ku siisaa nidaamkan gaarka ah laba ikhtiyaar, 1.8 GPM ama 2.5 GPM, markaa waad dooran kartaa khibrada aad rabto.
Tubbo Dheer oo loogu talagalay Qubeyska Gacanta
Heerka 'American Spectra Versa' wuxuu leeyahay qalliin 69-inji ah oo loogu talagalay lifaaqa qubeyska gacanta, kaas oo ka dheer inta caadiga ah ee aan aragno. Taasi waxay ku siinaysaa dabacsanaantii ugu dambaysay ee timahaaga la maydho, eeyga la dhaqo, maydhashada qubayska oo nadiif ah, ama baahi kasta oo kale oo aad u baahan karto.
6. Xirmada Qalabka Wax-soo-Saarista Fududeeyaha "Pelayless Claymore"
Fudud laakiin aan waqti lahayn, Xirmada Qalabka Wax-soosaarka ee 'Claymore Faucet Trim' waxaa loogu talagalay tubbo iyo qubeys mid ka mid ah. Waa wax lagu dari karo oo soo jiidasho leh oo lagu daro musqusha kasta.
Naqshadeynta Naqshadeynta Gaarka ah
Naxaas saliid-saliideysan ayaa u soo baxaya sidii xulasho aad u badan oo loogu talagalay musqulaha, iyo Peerless wuu ogyahay. Dhamaadka casriga ah ee lagu lammaaneeyay naqshadeynta saddexda qaybood ee fudud ee nidaamkan qasabaddu waxay dhammaystiraysaa muuqaalkaaga adigoon ka adkaanayn.
Nidaamkan qasabadaha ee aan sinaanta lahayn ayaa si sharaf leh u sita astaanta WaterSense. Taasi waxay ka dhigan tahay inay ku siineyso qubeys qabow halka aad qashinka biyaha ka yareyneyso 20%. Kaliya maahan hadiyadani deegaanka, laakiin waxay kuu keydinaysaa lacag biilkaaga.
Naqshadaysan Showerhead Design
Madaxa qubeyska ee godadka buuxa ma aha waxa ugu qurxoon adduunka, waana taas sababta Peerless u hubiyo inaysan ahayn waxa ugu horreeya ee aad ku aragto musqushaada. Naqshadeynta madaxa qubayska gaarka ahi wuxuu ku dahaadhaa daloolka daarad ballaaran.
7. KES Cadaadiska Nidaamka Qubayska Roobka
Dadka qaarkiis waxay jecel yihiin nasashada qubeyska roobka halka kuwa kale doorbidaan wax leh cadaadis badan oo biyo ah. The KES cadaadiska dheelitirka nidaamka qubeyska roobka wuxuu leeyahay kan ugu fiican labada adduunba: madaxa qubayska roobka oo leh buufiye gacan-qabad ah oo cadaadis badan saaran.
Balance Balance Press
Waxaan dhamaanteen soo wada marnay waqtiyo markii aan qubayska u galnay nus hurdada isla markaana cadaadiska xad dhaafka ah uu hurdada naga saaray. Haddii aad doorbideyso khibrad yar, waxaad jeclaan doontaa waalka dheelitirka ee cadaadiska-aan-lahayn.
Inta badan nidaamyada tubbada qubeyska waxay leeyihiin hal dherer tubbo haddii ay leeyihiin tuubbo haba yaraatee. KES wuxuu ku saabsan yahay wax u gaar ahaanta, in kastoo, sidaa darteed waxay bixiyaan tuubbo la dheereyn karo oo gaari karta inta u dhexeysa 59 iyo 75 inji.
Beddelasho Casri ah
Waxaad ogaan kartaa in nidaamkan qasabadu uu leeyahay muuqaal lamid ah SR SUN RISE system oo aan kuqornay # 2. Muuqaalku waa la mid yahay laakiin waxaa jira kala duwanaansho yar: nidaamka KES wuxuu leeyahay ikhtiyaarro dhammaystiran oo kala duwan wuxuuna la yimaadaa qiimo yar oo qiimo yar.
8. Moen Genta Posi-Temp Tub iyo Qubayska Maydhashada
Moen waa sayidkii qaabab fudud oo fudud hadana xarrago leh oo leh tayo sii socota. Kuwa ay Genta Posi-Temp tubbada iyo gogosha qubeyska waxay bixisaa isku dheelitirnaan qumman ee sharraxaadda iyo shaqada aan ka filayno astaanta.
Qaab aan caadi ahayn
Nidaamkan qasabadda tubbada Moen wuxuu leeyahay qaab isaga u gaar ah. Gudiga xakamaynta wuxuu leeyahay iskudhaf goolal dhaqameed iyo khadad casri ah oo laba jibbaaran, halka madaxa qubeyska uu kala qeybiyo khadka udhaxeeya qubayska roobka u balaaran iyo madax dhaqameed aad u cakiran.
Ma jiraan wax ka xun helitaanka nidaamka tuubada qubeyska aad jeceshahay laakiin soo ogaanshaheeda kaliya waxay leedahay madax qubeyska oo hadda waxaad u baahan tahay tuubbo tuubbo si aad ugu dhigmato Moodelkan Moen wuxuu la socdaa tuubbada tuubbada iyo madaxa qubeyska labadaba sidaa darteed qubayskaagu wuxuu umuuqdaa mid si wanaagsan loo daaweyn karo laga bilaabo maalinta koowaad.
Gacanta cidhiidhiga ahi waxay umuuqan kartaa mid quruxsan qaar ka mid ah qalabka tubbada qubeyska, laakiin qofka qaba arthritis-ka, dhaawacyada gacanta, ama arrimo kale, iyagu waxba ma aha laakiin waa xanuun. Moodelkan Moen wuxuu soo bandhigayaa gacmo ballaadhan oo u fududeynaya qof walba inuu isticmaalo.
9. Grohe Europlus Set Waysasho Qumman
The Grohe Europlus Set Shower Qumman waa ku daris qurux badan musqusha kasta oo leh dhammaystirka chrome. Foomkeeda la fahmi karo wuxuu ku siinayaa dhammaan waxqabadka aad rabto adigoon u hurin qaab.
Ayaa doonaya inuu kala doorto muuqaal dhaqameed iyo bilicsanaanta casriga ah? Maxaa diidaya in loo kala qaybiyo farqiga qaabka casriga ah? Taasi waa sida saxda ah waxa nidaamkan tubbada qubeyska ee 'Grohe' uu ku sameeyo qalabkooda qubeyska 'chrome'.
Aruurinta Tempesta waa mid caan ka ah taageerayaasha Grohe, oo leh qaab qurux badan iyo tayo sare leh. Nidaamkani wuxuu isku daraa madaxa qubayska roobka iyo buufiye gacan-ka-qabta ah oo ka soo ururiya Tempesta oo loo dhigo hal luxe.
Qubaysani wuxuu riixayaa 1.75 galaan oo biyo ah daqiiqaddii, taas oo ka hooseysa fursado badan oo suuqa yaal maanta. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad ilaalin doontid biyaha meeraha intaad weli helayso qubeyska riyadaada.
10. Grohe Grohtherm Smart Thermostatic Trim oo leh Module Xakamaynta
Roob-qubeyska weyn maahan waxa aad ugu baahan tahay qubeyska cajiibka ah. Waxaad u baahan tahay inaad awood u yeelatid inaad xakameyso ilaha biyaha kala duwan, heerkulka, heerarka cadaadiska, iyo inbadan. The Grohe Grohtherm Smart heerkulka gacantaada ayuu ku ridayaa gacmahaaga.
Macaamil ahaanshaha ayaa ah magaca ciyaarta qalabkan koontaroolka ah, oo xitaa waad u habeyn kartaa xaddiga xakamaynta aad haysato. Xulo mid, laba, ama saddex badhan oo go'aan ka gaadho astaamaha aad u rabto mid kasta oo ku saleysan waxa aad rabto inay maamusho
Ikhtiyaarrada Dhamaystirka ah
Sababtoo ah qaybtani xakamaynta ayaa si gooni ah u timaadda, waxay u baahan tahay inay iswaafaqdo qaanso kasta oo tuubbo ah. Waxaad kaheleysaa doorashadaada inta udhaxeysa lixda xulasho ee dhameystirka laga bilaabo chrome starlight ilaa garaaf adag.
Calaamadaha Si Fudud Loogu Fahmo
Haddii aad carruur leedahay, uma baahnid inaad tababar ku siiso sida loo xakameeyo qubayska maalin kasta, laakiin taasi waa waxa ku dhaca qaar ka mid ah qaybaha xakamaynta adag. Taasi ma noqon doonto kiiska astaamaha cad ee ku jira cutubkan xakamaynta.
11. Moen Smart Home wuxuu kuxiran yahay Maamulaha Musqusha Digital
Sida guddiga xakamaynta Grohe, tan Moen smart xakamaynta musqusha guriga waa hab lagu xakameeyo qubeyskaaga halkii aad ka ahaan lahayd madaxa qubeyska dhabta ah. Waa xalka tiknoolajiyadda sare oo qubeyskaaga ka dhigaya mid dhakhso badan, ka fudud, oo aad ugu habboon baahiyahaaga.
Mararka qaar dhibka yar ee nolosha ayaa kaaga careysiiya sida ugu badan, sida inaad biyo qabow madaxaaga saarto markii ugu horeysay ee aad gaarto qubeyskaaga. Waxaad ku ridi kartaa gudiga xakamaynta Moen qadka dabka si aadan u qoynin ilaa ay biyuhu ka gaarayaan heerkulka saxda ah.
Ikhtiyaarrada Xakamaynta Kaladuwan
Subax qabow oo qabow, ma jeclaan lahayd inaad si toos ah uga kacdo sariirtaada diirran una aado qubays diiran? Kontaroolahaani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad taas sameyso maxaa yeelay waxaad ka xakameyn kartaa qubeyskaaga taleefankaaga ama kaaliyahaaga codka sida Alexa ama Google Home sidaa darteed waxay ku dhaceysaa heerkulka saxda ah ka hor intaadan sariirta ka soo kicin.
Astaamaha Biyo Dhawridda
Maamulaha Moen wuxuu bixiyaa astaamo biyo ilaalin ah sida saacad kuu ogolaaneysa inaad xadido waqtigaaga qubeyska. Waxay ku habboon tahay qoysaska leh carruurta lumiya waqtiga iyo qof kasta oo doonaya inuu sii wado subaxnimadooda sidoo kale.
Doorashada Nidaamyada Tuubbooyinka Qubeyska ee ugu Fiican 2020
Qubayskaagu waa fursad lagu nasto oo lagu nasto, haddii ay tahay bilowga ama dhammaadka maalinta aad mashquulsan tahay. Sii tixgelinta ay uqalanto mid ka mid ah xulashooyinkaan loogu talagalay nidaamyada tubbada qubeyska ugu fiican sannadka 2020. Wixii xulashooyin sare ah oo badan oo ku saabsan qalabka gurigaaga, hubi inbadan oo ka mid ah baloogyada wax lagu iibsado.
Hore:: 10ka Tuug ee Ugu Fiican Filtarrada 2020 Next: Madaxyada qubeyska ugu fiican 2020
2020 / 11 / 19 3661